Onye Na-agba Karat nke Na-anaghị Achọ Iji Anya Ahụ Ebe Ndị Mmadụ Na-emegbu Ibe Ha | Baịbụl Na-agbanwe Ndụ Ndị Mmadụ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Maltese Maya Nepali Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Akụkọ Antoine Touma kọrọ
ABỤ M ONYE: LEBANỌN
NDỤ M BIRI: ABỤ M AKA OCHIE N’ỊGBA KARAT NAKWA N’ỊKỤ ỌKPỌ
Anọ m n’obodo a na-akpọ Remish too n’oge a na-alụ agha na Lebanọn. Obodo a dị nso n’ókè Izrel na Lebanọn. M ka na-echeta otú ogbunigwe ndị e liri n’ala si agbawa gbapụ ndị ọ na-enweghị ihe ha mere aka ma ọ bụ ụkwụ. Ihe siiri anyị ike, mpụ na ime ihe ike jukwara ebe niile.
Anyị dị mmadụ iri na abụọ n’ezinụlọ anyị. Anyị na-aga chọọchị a na-akpọ Maronaịt. Chọọchị a so n’ụdị Chọọchị Katọlik e nwere ná mpaghara ọwụwa anyanwụ ụwa. Ịkpa afọ ezinụlọ anyị anaghị ekwe papa m gaa chọọchị. Ma, mama m na-ahụ na mmadụ niile ọzọ gara chọọchị. Ka oge na-aga, ọ bịara dị m ka chọọchị anyị achịtaghị ájá ọ bụla n’ihi na ọ naghị enyere ndị ọ na-enweghị ka ọ hà ha aka otú ọhaneze na-anaghị enyere ndị ọ na-enweghị ka ọ hà ha aka.
N’oge m na-eto, ịkụ ọkpọ na ịgba karat bịara masịwa m. M malitere ịmụsi ịkụ ọkpọ na ịgba karat ike. Nke a mere ka m ghọọ aka ochie n’ịgba karat nakwa n’ịkụ ọkpọ, meekwa ka m bụrụ ọkaibe n’iji ngwá ọgụ dị iche iche alụ ọgụ. M kwuru n’obi m na ‘agaghị m akwụsịli agha ndị mmadụ na-alụ, ma m ga-agbalị mee ka ndị mmadụ kwụsị imeso ibe ha ihe ike.’ M hụhaala ebe mmadụ abụọ na-alụ ọgụ, m na-egbo ha ọgụ ozugbo. M na-ewe iwe ọkụ, obere ihe na-ewekwa m iwe. Ndị niile bi n’ebe ndịda Lebanọn na-atụ m ụjọ ebe ọ bụ na anaghị m achọ iji anya ahụ ebe ndị mmadụ na-emegbu ibe ha ma ọ bụ na-emeso ibe ha ihe ike.
N’afọ 1980, m bidoro iso òtù ndị na-agba karat ma na-akụ ọkpọ e nwere n’obodo a na-akpọ Beirut. N’agbanyeghị na a na-atụ bọmbụ n’obodo a kwa ụbọchị, na-akwakwa mgbọ, m na-aga amụ ịgba karat. Naanị ihe m na-eme bụ iri ihe, ihi ụra, na ibi ndụ ka Bruce Lee. Bruce Lee bụ nwoke Chaịna a mụrụ n’Amerịka. N’oge ọ nọ ndụ, ọ na-eme fim, ọ bụkwa azụ eru ala n’ịgba karat nakwa n’ịkụ ọkpọ. M na-akpụ isi m ka ọ dị ka nke Bruce Lee, na-aga ije ka ya, na-etikwa mkpu otú o si eti ma ọ gbawa karat. Ihu anaghịkwa atọ m ọchị.
Ebu m n’obi ịga Chaịna jiri ịgba karat na ịkụ ọkpọ na-akpata ego. Ma ná mgbede otu ụbọchị, mgbe m nọ na-amụ ịgba karat iji kwadebe nke ọma maka ịga Chaịna, otu enyi m kụụrụ m aka n’ụzọ. O du Ndịàmà Jehova abụọ bịa na nke m. Ihe m yi mgbe ahụ bụ efe ojii m na-eyi ma m mụwa ịgba karat, ọsụsọ zukwara m ahụ́. M gwara Ndịàmà Jehova ahụ, sị: “O nweghị ihe m ma na Baịbụl.” Amaghị m na malite mgbe ahụ gawa, ndụ m ga-agbanwe.
Ndịàmà Jehova ahụ ji Baịbụl gosi m ihe mere na ndị mmadụ agaghị emeli ka mmegbu na ime ihe ike kwụsịchaa. Ha gwara m na ọ bụ Setan bụ́ Ekwensu na-akpata ihe ọjọọ ndị ahụ. (Mkpughe 12:12) Otú ahụ́ si ruo Ndịàmà Jehova ahụ ala na otú ha si na-ekwu okwu n’atụghị ụjọ masịrị m. Obi dị m ụtọ mgbe ha gwara m na Chineke nwere aha. (Abụ Ọma 83:18) Ha gụkwaara m ihe e dere na 1 Timoti 4:8. Ebe ahụ sịrị: “Ọzụzụ nke ahụ́ bara ntakịrị uru; ma nsọpụrụ Chineke bara uru maka ihe niile, ebe o nwere nkwa maka ndụ dị ugbu a, na ndụ nke gaje ịbịa.” Ihe a Baịbụl kwuru gbanwere ndụ m.
O wutere m na mụ na Ndịàmà Jehova ahụ ahụghịzi n’ihi na ndị ezinụlọ m gwara ha abịazila. Ma, ekpebiri m na m ga-akwụsị ịgba karat na ịkụ ọkpọ, kpebiekwa na m ga-ebido ịmụ Baịbụl. Ihe a m kpebiri ime adịghị ụmụnne m ndị nwoke mma. Ma, m fooro ntutu taa na m ga-achọtarịrị Ndịàmà Jehova ka ha kụziwere m Baịbụl.
M chọgharịrị Ndịàmà Jehova, ma ahụghị m ha. N’oge ahụ, papa m nwụrụ na mberede. Ọnwụ ya na nsogbu ndị ọzọ anyị nwere n’ezinụlọ anyị wutere m. M bidola ịrụ ọrụ mgbe ahụ n’otu ụlọ ọrụ na-arụ ụlọ. Otu ụbọchị, otu onye mụ na ya na-arụ ọrụ aha ya bụ Adel kwụsịrị m, jụọ m ihe mere ihu m ji gbarụọ. Mgbe m kọọrọ ya, ọ gwara m na Baịbụl kwuru na a ga-akpọlite ndị nwụrụ anwụ n’ọnwụ. N’ọnwa itoolu sochirinụ, Onyeàmà Jehova ahụ dị obiọma ji ndidi kụziere m Baịbụl.
Ka m na-amụtakwu ihe Baịbụl kwuru, m bidoro chọpụtawa na m kwesịrị ịgbanwe otú m si akpa àgwà. Ma, ọ dịrịghị m mfe. Obere ihe na-ewe m iwe. Ma, Baịbụl mere ka m mụta otú m ga-esi na-ejide onwe m ma a kpasuo m iwe, m mụtakwara na ọ bụghị ihe ọ bụla batara m n’obi ka m kwesịrị ime. Dị ka ihe atụ, Jizọs dụrụ anyị ọdụ na Matiu 5:44, sị: “Na-ahụnụ ndị iro unu n’anya, na-ekpekwanụ ekpere maka ndị na-akpagbu unu.” Ndị Rom 12:19 kwukwara, sị: “Unu abọrọla onwe unu ọbọ, . . . n’ihi na e dere, sị: ‘Ọ bụ m nwe ịbọ ọbọ; m ga-akwụ ụgwọ, ka Jehova kwuru.’” Amaokwu Baịbụl ndị a na ndị ọzọ mere ka obi jiri nwayọọ nwayọọ dajụọ m.
Ọ bụ eziokwu na ndị ezinụlọ m achọbughị ka mụ na Ndịàmà Jehova na-amụ Baịbụl, ha na-akwanyeziri Ndịàmà Jehova ùgwù. Otu n’ime ụmụnne m ndị nwoke esorola m na-efe Jehova. Mgbe mama m nọ ndụ, ọ na-abụ ọ nụ ka ndị ọzọ na-akọjọ Ndịàmà Jehova, ya agbachitere ha.
Chineke ejirila ezigbo nwaanyị aha ya bụ Anita gọzie m. Mụ na ya na-eso ekwusa ozi ọma oge niile. Kemgbe afọ 2000, mụ na nwunye m bi n’ebe a na-akpọ Eskilstuna. Ọ dị na Swidin. Anyị na-akụziri ndị na-asụ asụsụ Arabik bi n’ebe ahụ Baịbụl.
M ka na-emetere ndị a na-emeso ihe ike ebere. Ma, ebe m ma ihe kpatara ndị mmadụ ji emeso ibe ha ihe ike, marakwa na obere oge ugbu a Chineke ga-eme ka ime ihe ike kwụsị, ahụ́ eruola m ala, obi na-adịkwa m ụtọ.—Abụ Ọma 37:29.
Mụ na nwunye m na-aga ezi ndị mmadụ ozi ọma. Obi na-atọ anyị ụtọ ịkụziri ndị mmadụ gbasara Jehova